U isticmaal qashinka xoolaha si aad u soo saarto bacrimin dabiici ah oo dabiici ah
Daaweynta macquulka ah iyo u isticmaalka wax ku oolka ah ee digada xoolaha waxay u keeni kartaa dakhli badan beeralayda inteeda badan, laakiin sidoo kale waxay wanaajineysaa casriyeynta warshadooda.
Bacriminta dabiiciga ah waa nooc bacrimin ah oo leh shaqooyinka bacriminta jeermiska yar yar iyo bacriminta dabiiciga ah, taas oo inta badan laga helo haraaga xoolaha iyo dhirta (sida digada xoolaha, cawska dalagga, iwm) waxaana ka kooban daaweyn aan dhib lahayn.
Tani waxay go'aamisaa in bacriminta dabiici ahaaneed ee dabiiciga ahi ay leedahay laba qaybood: (1) shaqo qaas ah oo ay leedahay sheyga. (2) qashinka dabiiciga ah ee la daaweeyay.
(1) Noole si gaar ah u shaqeynaya
Noolaha gaarka u shaqeeya ee bacriminta noolaha badanaa wuxuu tixraacaa sheyga, oo ay kujiraan noocyada kaladuwan ee bakteeriyada, fangaska iyo actinomycetes, oo kobcin kara isbadalka nafaqooyinka carrada iyo koritaanka dalagyada kadib marka la dalbado carrada. Hawlaha gaarka ah waxaa loo kala saari karaa sida soo socota:
Bakteeriyada hagaajisa nitrogen-ka: (1) bakteeriyada saxa ah ee nitrogen-ka: inta badan waxaa loola jeedaa rhizobia dalag xalaal ah sida: rhizobia, rhizobia nitrogen-hagaajinta, geedaha rhizobia ee ammonia-hagaajinta, iwm.; Bakteeriyada nitrogen-qummanaanta dalagyada sumcadda leh ee sida sharci-darrada ah u leh sida Franklinella, Cyanobacteria, waxtarkooda hagaajinta nitrogen ayaa ka sarreeya. Bacteria Bakteeriyada hagaajisa nitrogen-ka: sida bakteeriyada wareegsan ee nitrogen-hagaajinta, bakteeriyada sawir-qaadka ah, iwm. (3) Bakteeriyada wadajirka ah ee nitrogen-ka: waxaa loola jeedaa jeermis-dileyaasha keli ahaan kara markii lagu noolaado xididka iyo dusha sare ee dhirta rhizosphere , sida hiddo-wadaha 'Pseudomonas genus', lipogenic nitrogen-fixing helicobacteria, iwm.
2. Fossphorus dissolving (dissolving) fangaska: Bacillus (sida Bacillus megacephalus, Bacillus cereus, Bacillus humilus, iwm), Pseudomonas (sida Pseudomonas fluorescens), Bakteeriyada ku xunta jirka Nitrogen, Rhizobium, Thiobacillus thiooxidans, Penicillium, Penicillium, , Streptomyces, iwm.
3.Bakteriyada la baabi'iyey (milmay): bakteeriyada silicate (sida colloid Bacillus, colloid Bacillus, cyclosporillus), bakteeriyada aan-silicate ahayn.
4 Antibiotics: Trichoderma (sida Trichoderma harzianum), actinomycetes (sida Streptomyces flatus, Streptomyces sp. Sp)), Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis noocyo, iwm.
Bakteeriyada kor u qaadista -Rhizosphere iyo fangaska kor u qaada dhirta.
6.Bakteeriyada mareegta iftiinka: noocyo dhowr ah oo ka mid ah hidde-wadaha 'Pseudomonas gracilis' iyo noocyo dhowr ah oo ka mid ah genus Pseudomonas gracilis. Noocyadani waa bakteeriyada aerobic ee isku-dhafan oo ku kori kara jiritaanka haydrojiin waxayna ku habboon yihiin soo-saarista bacriminta noolaha.
Bakteeriyada wax soo saarka u adkeysata iyo kordhinta: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Phylloidase, Cordyceps iyo Bacillus.
8. Bakteeriyada qudhmisa cellulose: thermophilic lateral spora, Trichoderma, Mucor, iwm.
Nooleyaasha kale ee shaqeynaya: kadib markii ay sheygu soo galaan carrada, waxay qarin karaan walxaha firfircoon ee jir ahaaneed si loo kiciyo loona xakameeyo koritaanka dhirta. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin daahirinta iyo ku-dhalashada sunta ciidda, sida khamiirka iyo bakteeriyada lactic acid.
2) Agab dabiici ah oo laga soo dheegtay haraaga xoolaha oo lakala baxay. Maaddooyinka dabiiciga ah ee aan lahayn halsano, looma isticmaali karo si toos ah bacriminta, sidoo kale suuqa ma soo geli karaan.
Si looga dhigo bakteeriyadu inay si buuxda ula xiriirto alaabta ceyriinka ah ayna gaarto halsano dhammaystiran, waxaa si isku mid ah loogu walaaqi karaa compmishiinka leexinta sida hoos ku xusan:
Qalabka dabiiciga ah ee badanaa la isticmaalo
(1) Saxarada: digaag, doofaar, lo ’, ido, faras iyo digada kale ee xoolaha.
(2) Caws: Caws-galley, caws, caws qamadi, caws soybean iyo jirid kale oo dalag ah.
(3) buush iyo buunshi. Budada xabxabka bariiska, budada qolofta looska, budada iniinyaha looska, rootida bariiska, fungus, iwm.
(4) qashinqubka: qashin qubka, soy suugada, khalka, dhogorta furfural, xylose dregs, enzyme dregs, togregs, sonkorta iwm.
(5) cuntada keega. Doolshada soybeerka, cuntada soybean, saliida, keega kufsiga, iwm.
(6) Dhoobo kale oo gudaha ah, dhoobada shaandhada ee sonkorta sokorta, dhoobada sonkorta, bagasse, iwm.
Agabkan ceyriinka ah waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin nafaqeeyayaal nafaqeysan soo-saarista bacriminta noolaha halsano kadib.
Iyada oo jeermisyo gaar ah iyo qalab dabiici ah oo baaba'ay labadan xaaladood ayaa laga samayn karaa bacrimin dabiici ah oo bayooloji ah.
1) Habka isugeynta tooska ah
1, xulo bakteeriyada khaaska ah ee microbial: waxaa loo isticmaali karaa hal ama labo nooc, ugu badnaanna kama badna seddex nooc, maxaa yeelay xulashooyinka badan ee bakteeriyada, ayaa ku tartamaya nafaqooyinka midba midka kale, waxay si toos ah u horseedaa wadajirka wadajirka ah.
2. Xisaabinta xaddiga isugeynta: sida ku cad heerka NY884-2012 ee bacriminta bio-organic ee Shiinaha, tirada wax ku oolka ah ee bakteeriyada nool ee bacriminta bio-organic waa inay gaaraan 0.2 milyan / g. Hal tan oo ah walxaha dabiiciga ah, in ka badan 2 kg oo ah sheybaarayaal gaar ah oo shaqeynaya oo leh tirada wax ku oolka ah ee bakteeriyada nool ≥10 billion / g waa in lagu daraa. Haddii tirada bakteeriyada nool ee firfircoon ay tahay 1 bilyan / g, in ka badan 20 kg ayaa loo baahan doonaa in lagu daro, iyo wixii la mid ah. Dalal kala duwan waa inay si macquul ah ugu daraan shuruudo kala duwan.
3. Ku darida habka: Ku dar bakteeriyada shaqeyneysa (budada) walxaha dabiiciga ah ee qallalan sida ku xusan habka lagu soo jeediyay buuga hawlgalka, si siman u walaaq oo xir.
4. Taxaddarrada: (1) Ha ku qallajin heerkulka sarreeya ee ka sarreeya 100 ℃, haddii kale waxay dili doontaa bakteeriyada shaqeysa. Haddii ay lagama maarmaan tahay in la qalajiyo, waa in lagu daraa ka dib marka la qalajiyo. (2) Sababo kala duwan awgood, waxa ku jira bakteeriyada ku jirta bacriminta dabiiciga ah ee lagu diyaariyo habka xisaabinta caadiga ah badanaa kuma xirna xogta saxda ah, sidaa darteed geedi socodka diyaarinta, sheybaarka shaqeynaya guud ahaan waxaa lagu daraa in ka badan 10% xogta saxda ah .
2) gabowga labaad iyo habka fidinta dhaqanka
Marka loo barbardhigo habka isugeynta tooska ah, qaabkani wuxuu leeyahay faa iidada keydinta qiimaha bakteeriyada. Khasaaraha ayaa ah in tijaabooyin loo baahan yahay si loo ogaado qadarka microbes gaar ah oo lagu daro, iyadoo lagu darayo wax yar oo dheeri ah. Waxaa guud ahaan lagu talinayaa in qadarka lagu daro uu 20% ama ka sareeyo habka isku darista tooska ah isla markaana la gaaro heerka bacriminta dabiiciga ah ee bayoolojiga iyadoo loo marayo habka gabowga labaad. Tallaabooyinka qalliinka waa sida soo socota:
1. Xulo bakteeriyada khaaska ah ee loo yaqaan 'microbial bacteria' (budada): waxay noqon kartaa mid ama labo nooc, ugu badnaanna kama badnaan karto seddex nooc, maxaa yeelay bakteeriyada badan ayaa doorata, u tartanta nafaqooyinka midba midka kale, waxay si toos ah u horseedaa saameynta bakteeriyada kala duwan.
2. Xisaabinta xaddiga isugeynta: marka loo eego heerka bacriminta noolaha ee Shiinaha, tirada wax ku oolka ah ee bakteeriyada nool ee bacriminta noolaha waa inay gaarto 0.2 milyan / g. Hal tan oo walxo dabiici ah ah, tirada wax ku oolka ah ee bakteeriyada nool ≥10 billion / g ee microbial shaqeynaya (budada) waa in lagu daraa ugu yaraan 0.4 kg. Haddii tirada bakteeriyada nool ay tahay 1 bilyan / g, in ka badan 4 kg ayaa loo baahan doonaa in lagu daro, iyo wixii la mid ah. Wadamo kaladuwan waa inay raacaan heerar kala duwan oo loogu talagalay iskugeyn macquul ah.
3. Ku darida habka: bakteeriyada shaqeyneysa (budada) iyo buunshaha qamadiga, budada buunshaha bariiska, buunshaha ama wixii kale oo iyaga ka mid ah si loogu qaso, si toos ah ugu dar walxaha dabiiciga ah ee qallalan, isku darka si siman, oo la is dulsaaray ilaa 3-5 maalmood si loo sameeyo waxyaabaha gaarka ah bakteeriyada shaqeyneysa is-faafinta.
4. Qoyaanka iyo xakamaynta heerkulka: inta lagu guda jiro halsano halsano, qoyaanka iyo heerkulka waa in la xakameeyaa iyadoo loo eegayo astaamaha bayoolojiga ee bakteeriyada shaqeysa. Haddii heerkulku aad u sarreeyo, sarajoogga sarajoogga waa in la yareeyaa.
5. Ogaanshaha bakteeriyada shaqeysa ee gaarka ah: ka dib dhamaadka xirmidda, muunad qaadista iyo u dir hay'adda leh awoodda ogaanshaha microbial-ka ee tijaabada hordhaca ah in waxyaabaha ku jira sheybaareyaasha gaarka ahi ay buuxin karaan heerka, haddii la gaari karo, waxaad sameyn kartaa bacriminta noolaha habkan. Haddii tan lagu guuleysan waayo, ku dar qaddarka isku-darka ee bakteeriyada gaarka ah ee shaqeynaya 40% habka isku-darka tooska ah kuna soo celi tijaabada illaa laga gaaro guul.
6. Taxaddar: Ha ku qallajin heerkulka sare ee ka sarreeya 100 ℃, haddii kale waxay dili doontaa bakteeriyada shaqeysa. Haddii ay lagama maarmaan tahay in la qalajiyo, waa in lagu daraa ka dib marka la qalajiyo.
Gudaha soo saarista bacriminta bio-organic halsano ka dib, guud ahaan waa waxyaabo budo ah, oo badanaa duulaya dabaysha xilliga qalalan, taas oo keeneysa luminta alaabta ceeriin iyo wasakhda wasakhda. Sidaa darteed, si loo yareeyo boodhka loona ilaaliyo wax karinta,habka granulation badanaa waa la isticmaalaa. Waad isticmaali kartaa granulator ilkaha kicinaya sawirka kore ee granulation, waxaa lagu qasan karaa humic acid, kaarboonka madow, kaolin iyo kuwa kale oo adag in alaabta ceyriinka lagu qoro.